चाक चाहिँ भर्जिन रहेछ – Nepali Sex Story - Desi Sexy Stories
Home » Nepali Sex Stories » चाक चाहिँ भर्जिन रहेछ – Nepali Sex Story
चाक चाहिँ भर्जिन रहेछ – Nepali Sex Story
” चाक चाहिँ भर्जिन रहेछ – Nepali Sex Story ” Nepali sex stories. Nepali erotic sex story. Nepali yaun katha. Nepali virgin keti chikeko katha. Subscribe www.nakednepaligirl.com
म र मेरो साथी कामको सिलसिलामा काठमाडौंदेखि बुटवल गएका थियौं । अलि धनी भएकोले म जहिले पनि आफ्नो निजि कारमा हिड्ने गर्थे । हुन त बुटवलमा मेरै आफ्नै मान्छे भए पनि म होटेल मै बस्न रुचाउने गर्थे । मेरो काम बुटवलमा भए पनि म भैरहवाको एउटा प्रसिद्ध होटेलमा बसेको थिए । चैत महिनाको समय थियो त्यसैले साझ पख बाल्कोनीतिर साथी र म बसेर हावा खाइरहेका थियौ । होटेलको तल हेरेको एउटा १८/१९ बर्षकि च्वाँक केटी होटेल भित्र छिरी र मेरो साइडको रूममा पसि । त्यो रूम भित्र दुईवटा केटाहरु भित्र गए र अनौठो आवज निकाल्न थाले ।
सायद तिनीहरुले थ्री सम सेक्स गर्दै थिए । मैले र साथिले एक अर्कालाई हेराहेर गर्‍यौ ।
“हामी पनि रमाइलो गरम ” उसले भन्यो ।
“हुन्छ त गरम “, भने ।मैले पनि केटि नचाखेको पनि ३ महिना जति भै’सकेको थियो ।
हामी दुबै रूम भित्र गयौं र वेटरलाई बोलायौ । तुरुन्त वेटर आइपुग्यो र के सेवा दिउ भनेर सोध्यो ।
“हामी एकदमै भोकाएको छौँ । हामीलाई १६/१७ कि खाना चाहियो ।”भने ।
उसले कुरा बुझी सकेछ र एउटा भर्खरकी केटी छे भन्यो । नाम चाहिँ शर्मिला रे , उमेर १७कि र कक्षा १२मा पढ्दै । एक पटकको ५००० रुपैयाँ पनिभन्यो । मैले एक रातको कति को भनेर सोधे । उसले सिधै १५००० रुपैयाँ भन्यो। मैले उसलाई रकम हल्का मिलाउन भने तर उसले मानेन किनकी उ भर्खरकी केटि थिइ र भर्खरै यो व्यबहारमा लागेको पनि भन्यो ।
माल टाईट होला भनेर ५००० एड्भान्स दिए । केटि बुटवलबाट आउन पर्ने भएकाले १ घन्टा जति लाग्छ उसले भन्यो । हामी वेट गरि राख्यौं । मलाइ झ्याउ लागेर म नुहाउन गए । नुहाउन गएको २ मिनेट मै शर्मिला आइसकेको रहिछे । उता मेरो साथिले शर्मिलासित मोज गर्न सुरु गरि सकेको थियो तर म चाहिँ नुहाउदै थिए । हतार हतारमा नुहाएर म बाथरूमबाट बाहिर निस्के । म चकित भए किन भने त्यो शर्मिला भन्ने केटी मेरो बहिनी(फुपूको छोरी) थिइ। उसको नाम अरु नै केही थियो । मेरो बहिनिले पनि मलाई देखि र हतार हतारमा आफ्नो स्तन लुकाउन थालि। मेरो साथी पनि एक छिन अचम्म पर्‍यो । मलाई मेरो साथिको अगाडी मुख देखाउन लाज लागेको थियो तर मेरो साथिलाई हाम्रो नातागोताको बारेमा केही थाहा थिएन ।
बहिनीले भनि ,”दाइ , गल्ती भयो माफ गर्दिनुस् । यो कुरा कसैलाई नभन्नु होला ।”
म चुपचाप बसिरहे ।
उसले फेरि कसैलाई नभन्दिनु भनेर भिख मागी । मलाई लाज लागि रहेको थियो । मेरो साथिले अब चाहिँ थाहा पायो। उसले हाम्रो बारेमा सोध्यो । मैले उसलाई बहिनिको बारेमा भन्दिए । उसले मलाई भन्यो कि बहिनी सग कुरा गर भनेर । बहिनी रुदै थिइ त्यो देखेर मैले रिसाएको स्वरमा उसलाई कहिले देखि यस्तो काम गरेको भनेर सोधे । उ रुदै यो दोश्रो पटक हो भनी । अनि फूपू फुवाजुलाई यो सब थाहा छ कि नाइ सोधे? उसले थाहा छैन भनि र अहिले साथिको जन्मदिनमा जान्छु भनेर आएको पनि भनी । अनि तिमी त धनी नै छौ तैपनि किन यस्तो काम गर्छौ भनेर सोधे । उसले आफ्नो यौन तृष्णा मेटाउन यस्तो काम गरेको भनी र महङ्गो शुल्क लिएर राम्रो मान्छेहरुसित सेक्स गर्न पाइन्छ भनी जसले गर्दा सुरक्षीत हुने पनि भनी । यो सब सुनेर मेरो साथिले गिद्दे नजरले बहिनी माथी हेर्दै थियो । मेरो बहिनी पनि एकदम सेक्सी थिइ । पर्फेक्ट स्तन , ठुलो चाक र नसालु हेराई थियो । कपडा पनि छोटो लगाएको थिइ । खासमा म पनि बहिनीको शरीर प्रति पहिले देखि नै साह्रै आकर्षित थिए । उसग सेक्स गर्न रहर लागेको थियो तर खान्दानको इज्जत बचाउन मैले उसलाई घर जाने भने ।तर मेरो साथी चाहिँ यो मान्ने वाला थिएन । उसको लाडो थन्किसकेको थियो । लाडो समाउदै बसिरहेको थियो। मेरो बहिनी फर्किदै थिइ तर साथिले बाटो छेक्यो । यसरी कहाँ जान पाइन्छ मसग सेक्स नगरेर भन्न थाल्यो । मैले उसलाई छोड् भने तर उ भने छोड्ने मूडमा थिएन। एड्भान्स्को ५००० उसले नै तिरेको थियो त्यसैले बढी बोली राखेको थियो । मैले बहिनिलाई ५००० फिर्ता दिई भने तर त्यो पैसा दलालले लग्यो भनी । तर साथिले मान्ने वाला थिएन । बहिनी रुदै भनी ,” दाइ माफ गर्नु होला । मैले तपाईंको साथीसग सेक्स गर्नै पर्छ नत्र झन बढी सम्स्या आउँछ ।” मैले के समस्या भनेर सोधे । उ मौन रहि र पछि भन्ने भनी ।
बहिनी फटाफट मेरो साथिको नजिक गई र किस् गर्न थाली । म हेरेको हेरि भए । साथी पनि चिक्न नपाउदा खप्पिस भाको थियो त्यसैले मजाले किस गर्‍यो । बहिनिले आफ्नो सबै कपडा खोली र कालो ब्रा र पेन्टीमा मात्र बसेकि थिइ । यो देखेर म आफैं उत्तेजित भए र पछाडीबाट गएर बहिनिलाइ च्याप्प समातेर बेड्मा सुताए ।यो देखेर साथी र बहिनी दुबै हासे । मैले बहिनीलाई किस गरे । मेरो जिब्रोले उसको जिब्रो खेलाइ राखेको थिए । ५ मिनेट जति किस गरे।
त्यसपछि मेरो साथी अब मेरो पालो भन्दै बहिनीको ब्रा फुकाल्यो र दायाँ दूध चुस्न थाल्यो । म पनि के कम मैले बायाँ दूध चुस्न थाले । म र मेरो साथी भन्दा बढी मेरो बहिनी खुशी भएको थिइ । उ सुस्त आवज निकाल्दै अह अह अह् अह् गर्दै थिइ। त्यसपछी फटाफट मैले उसको पेन्टी खोलिदिए ।आहा!!! कति राम्रो पुति । पूरा शेभिङ्ग गरेर चिल्लो बनाएको थिइ । “चान्चुने पुति कहाँ हो र १५००० को पुति हो राम्रो भै’हाल्छ नि “, भने । यो सुनेर तीनै जना हास्यौ। मलाई देखेर बहिनीले पहिला मेरो दाइले चिक्नु हुन्छ अनि बल्ल दाइको साथिले भनी । यो सुनेर म खुशी भए र मजाले पुति चाट्न थाले । साथिले भने किस र बूब्स चुस्दै थियो । उसको पुति टाइट नै थियो र पानी पनि झरी सकेको थियो । मैले त्यो पानी पिए र झन उत्तेजित भए। उसको पुति भित्र दुइटा औंला छिराए । उ कराउँदै थिइ । मैले आफ्नो पुरै कपडा फुकाले र ६ इन्चको लाडो बाहिर निकाले । मेरो लाडो देखेर बहिनी हासेर कति सानो लाडो भनी । मलाई रिस उथ्यो र भने ,”के को सानो भन्छेस् । त जस्तो त १० वटा जतिलाई चिकिसके । त ११ औं परिस् । ”
बहिनिले भनी ,” तपाईं त म भन्दा नि ठुलो भालु हुदो रैछ । खै लाडो चुसम न ।”
उसले मजाले लाडो चुसी । गेडा समेत मुख भित्र हालेर चुस्न थाली । मैले त सहनै सकेन र पुरै माल उसको मुख भित्र झारिदिए ।उसले पनि मिठो मानेर पुरै खाई । म थकित भए र चुपचाप वसे । अब चाहिँ साथिले पुति चाट्दै थियो । बहिनीको त्यो ठुलो ठुलो चाक देखेर मेरो लाडो फेरि ठुलो भयो। मैले लाडो चाकको दुलो भित्र तयार पारे र एक झटका दिए । चाक चाहिँ भर्जिन रहेछ । आधी मात्र लाडो भित्र छिर्‍यो । फेरि एक झटका दिए र पुरै लाडो भित्र छिराए । बहिनी ऐया ऐया!! गर्दै कराउँदै थिइ । मैले चाकमा दनादन दिन थाले र बहिनिले पनि उफ्रिदै साथ दिन थाली । ३० मिनेट पछि मेरो माल झर्न थाल्यो । मैले पुरै माल उसको चाक भित्र झारे किन भने चाक भित्र झारे पछि उ गर्भवती हुन्नथी । उसले पनि माल झारिसकेको रहेछी र हामी किस गर्दै बस्यौं । अब चाहिँ साथीले लाडो पुतिमा हाल्न तयार भाको थियो । पुतिमा लाडो के तयार पारेको थियो बहिनिले कण्डम ब्यागबाट निकाली र उसलाई लगाउन पठाइ । उसले पनि लगभग १५ मिनेट सम्म पुतिमा लाडो भित्र बाहिर गर्‍यो र कण्डम मै माल झार्यो।
यति गरेर हामी तीन जना नै थकित रह्यौ । मैले वेटरलाई रोयल स्ट्याग र चिकेन अर्डर गरे । तिनै जनाले मजाले खायौं । मैले साथिलाई धेरै रक्सी खुवाए ताकी उ छिटो सुतोस् । नभन्दै त्यस्तै भयो र उ सुत्यो । म र बहिनिले फेरि एक अर्काको कपडा खोलिदियौ र किस गर्दै बाथरूम तिर गयौं । मैले पिसाब फेर्न लागेको थिए तर बहिनी आएर लाडोमा मुख थापेर मुखमा पिसाब फेर्ने भनी ।मैले पनि फेरि दिए। उसले मजाले घट्घट पिसाब पिइ । उसको त्यो चर्तीकला देखेर म अचम्म भए र यस्तो को को सग गरेको छौँ भनेर सोधे । उसले उत्तरमा मसित दोश्रो पटक भयो भनी र पिसाब खाने पहिलो पटक गरेको भनी । त्यस पछि हामिले मजाले शावरमा एक अर्कालाइ सफा गर्‍यौ र बेडमा गयौं । उ र म 69 पोजिसन्मा बस्यौ र एक अर्काको चाट्न लाग्यौं । उसले हार्ड सेक्स मन पराउथी त्यसैले मैले पनि उसलाइ कहिले पुति त कहिले चाकमा लाडो छिराएर चिकेको चिकी गरे । उसको उमेर भर्खर १६ भए पनि ब्लु फिल्म हेरि हेरि सेक्स गर्न धेरै तरिका जानेको रहेछी । मसग त उस्ले कण्डम नलागएर नै सेक्स गरि र माल पनि पुति भित्रै झार्न लगाई।
यसरी नै रात भरी हामिले ७ चोटि सेक्स गर्‍यौं । बिहान ६ बजे नै उसको घरबाट फोन आयो र उसले १ घन्टामा आइपुग्ने भनी । उसले मलाइ मर्निङ किस दिई र मैले पनि उसको दूध चुसे । उसले आफ्नो ब्रा र पेन्टी खोजी तर कतै पनि भेटाएनी किनभने उसको ब्रा र पेन्टी काठमाडौं लानको लागि मैले लुकाएर राखेको थिए। उसले बिना ब्रा र पेन्टी कपडा लगाइ । ब्रा बिना उस्को बूब्स धेरै हल्लीएको थियो । च्याप्पै पकाडेर खेलाइ रहौ जस्तो ।
मैले उसलाई १०००० रुपैयाँ दिए तर उसले चाहिदैन भनी । उसले पैसा माग्नुको कारण सिर्फ नराम्रो मान्छे सग सेक्स नगर्नु थियो । आफ्नो दाइ जस्तो मान्छेलाई त शंका नै गर्न मिल्दैन् भनी । मैले औसधि खाए भनेर २००० दिए ।
मैले पनि उ साच्चिकै रहर मेटाउनको लागि सेक्स गरेको हो भने उसलाई काठमाडौं आउन आग्रह गरे । उसले पनि १२ को परिक्षा सके पछि आउछु भनी र मसित मात्र सेक्स गर्ने कसम खाई ।
अहिले २ बर्ष भइसक्यो बहिनी र म एउटै फ्लाटमा बस्छौं । उ बि.बि.ए पढ्दै छे । बाहिरी रूपमा हामी दाइबहिनी देखिन्छौ तर भित्र भने हामी एउटै बेड्मा सुतेर चिकामारी खेल्छौ । पढाईमा उ खास्सै ट्यालेन्ट न भए पनि मसित चिक्न फर्स्ट छे। म पनि कामको सिलसिलामा जहाँ जहाँ जान्छु उसलाई पनि उतै लगेर चिक्छु ।
म्यानेजर कि बुढि चिक्दा